Hantidhowrka oo laalay qandaraas uu bixiyay Wasiirka Ganacsiga | KEYDMEDIA ENGLISH
Baal-maridda habraaca iibka Qaranka, garab-marka guddiga ku meelgaarka ee iibka Qaranka iyo qodobbo kale oo sharciga baalmarsan ayuu Xafiska Hantidhawrka Guud, u cuskaday hakinta qandaraas uu bixiyay Wasiirka Ganacsiga.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hantidhawrka Guud ee Qaranka, Maxamed Maxamuud Cali, ayaa hakiyay heshiis uu Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha, Khaliif Cabdi Cumar, Shirkadda Maru Port Service LTD, ku siiyay qandaraaska hubinta tayada badeecadaha dalka ka soo dagaya iyo kuwa laga dhoofiyo.
Xafiska Hantidhawrka Guud, wuxuu Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ku eedeeyay in qaab aan waafaqsanayn nidaamka dowliga ah iyo shuruucda dalka ay u martay hawlaha bixinta qandaraaskaan, kaas oo hay’adaha dowladda ka dhex dhaliyay dood xooggan
Hantidhawruhu, wuxuu sheegay in Wasaaraddu horboodday hawlo hore u socday oo la xiriira bixinta qandaraaskan “hubinta tayada badeecdaha” isla-markaana ay hore talooyin kaga bixiyeen Guddiga Maamulka Maaliyadda (Financial Governance Committee).
Wuxuu xusay in Wasaaradda Ganacsiga, ay sidoo kale, ag-martay, Hay'adda Tayo-dhawrka Soomaaliyeed oo saameyn ku leh arrimaha tayo-dhawrka dalka, sharci ahaanna ka mas'uul ah hawlahaas, islamarkaana ay baal-martay habraaca iibka Qaranka iyo guddiga ku meelgaarka ee iibka Qaranka & qodobbo kale.
“Waa in gabi ahaanba Wasaaradda Ganacsiga ay joojiso hawlaha bixinta Qandaraaska hubinta tayada badeecadaha dalka ka soo daga iyo kuwa laga dhoofiyo iyadoo Xafiiska Hantidhawrka Guud uu kor joogtaynayo si dhowna uga warhayn doono arrintan”, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay M. M. Cali.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay si deg deg ah uga shaqayso dhismaha Guddiyada iyo Hay’adda iibka Qaranka si waafaqsan sharciga iibka Qaranka si looga gudbo guddiga ku meel gaarka ah ee hadda shaqeeya, loogana fognado jahawareerka arrimaha iibka oo saameyn weyn ku leh hantida Qarank.
Masuuliyiinta Wasaaradda Ganacsiga , ayuu Hanti-dhowrku uga digay, baal-maridda shuruueda dalka, wuxuuna ku wargaliyay masuulkii falal ceynkaan lagu helo lala xisaabtami doono, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waraaq 06/01/2022, ka soo baxday, Wasiirka Ganacsiga, Khaliif Cabdi Cumar, oo la ogeysiiyay, Maareeyaha Hay’adda Taya-dhowrka Soomaaliyeed, Xafiiska Garyaqaanka Guud ee Dawladda, Xafiiska Hanti-dhowrka Guud ee Dawladda iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha XFS, ayaa lagu sheegay in Shirkadda Maru Port Service LTD, loo qaatay qabashada howlaha Tayada Badeecadaha Dalka la keenayo iyo kuwa laga dhoofinayo.
Waxaa warkaas si cad loogu sheegay in Wasaaradda iyo Shirkaddu kala saxiixan doonaan heshiis shaqo (Service Contract) si waafaqsan Sharciyada dalka u yaalo, lana faahfaahin doonaa dhammaan adeegyada dhowridda tayada ee ay qaban doonto Shirkaddu.
Maru Port Service LTD, waxa ay sheegataa in ay lamaane la tahay Shirkadda tayadhowrka caalamiga ah ee ‘Intertek international’, taas oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ilaalinta tayada.
Xogo hoose, ayaa sheegaya in qandaraaska uu hakiyay Hantidhawrka Guud ee Qaranka, Maxamed Maxamuud Cali, uu ku lug leeyahay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, hayeeshee, xogtaas hoosta kama xariiqin Keydmedia.
RW Rooble, wuxuu maanta kulanka Golaha Wasiirrada ka sheegay in laga fogaado bixinta qandaraasyada aan sharciga ahayn iyo ku Xad-gudubka Hantida Qaranka, wuxuu Wasiirrada ku boorriyay in ay ka dhowsadaan fal-kasta oo musuqmaasuq ah.
Xilliyada doorashada boobka hantida dadweynaha ayaa caan ka ah xaafiisyada Dowladda Soomaaliya.